प्रहरी आएर क’पडा खो’लि श्रीमती माथि च’ड्दै गरेको देखेपछि श्रीमानले जे गरे ….(भिडियो सहित) – Ujyaalo Patrika
संसद विघटनविरु’द्ध दाँत माझेर विरोध
काठमाडौं : विवेकशील पार्टीले संसद विघटनविरु’द्ध दाँत माझेर विरोध जनाएको छ। केही दिनअघि प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियसभा बैठकमा सम्वोधनका क्रममा रोस्ट्रममै थुकेपछि त्यसको प्रतिकात्मक रुपमा मंगलबार विवेकशीलले विरोध जनाएको हो।
जथाभावी थुक्नु सार्वजनिक स्वास्थ्यका लागि हानिकारकसँगै सार्वजनिक शिष्टताको हिसाबले पनि उचित नभएको भन्दै विवेकशीलले दाँत माझेर प्रदर्शन गरेको हो। देशको नेतृत्व गर्ने, अनुकरणीय व्यक्तिले गर्ने कामले धेरैलाई प्रभावित पार्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्ना सार्वजनिक गतिविधिमाथि ध्यान दिन पनि विवेशीलले सुझाएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेर लोकतन्त्रमाथि धावा बोलेको भन्दै विवकेशील करिब १ महिनादेखि आन्दोलित छ। विवकेशीलले हरेक दिन माइतीघर मण्डलमा संसद विघटनको असंवैधानिक कदम तथा अधिनायकवादविरुद्ध प्रदर्शन गरिरहेको छ।
Previous पत्नीलाई घरकाे काम गराएबापत २ करोड क्षतिपूर्ति !
Next ’यस्ता छन् ‘यौ’,न खेलौनाका फाइदा – बेफाइदा : यसरि गर्नुस प्रयोग